Shiinaha Halbeegga Joomateri Joomatikada Hal-abuurka Birta Khamriga Haysta. soosaarayaasha iyo alaabada | Shengrui
Hal-hayska Khamriga Halbeegga ah ee Joometriiska.
Silig bir ah oo tayo sare leh, Dahab. madow.wite iwm
Waxyaabaha: silig bir ah oo tayo sare leh
Dhamee: Dahab. madow.wite iwm
Cabir: 28.5 * 27.5 * 21.5cm
Xirmo: 1pc / bac balaastig ah / sanduuq.8pcs / kartoon.
Naqshad casri ah oo fudud, hayso 6 dhalo.
Naqshad qaabaysan, xirmo, midab ayaa la aqbali doonaa.
Pragmatism fudud: Looma baahna isku imaatin, kaliya isku soo ururi. Muuji oo keydi ilaa 6 dhalo oo khamri ah ama dhalooyin biyo ah oo kala duwan.
Muuqaalka Soo jiidashada leh: Khadadka nadiifka ah ee nadiifka ah waxay u dhigmaan dhammaystirka madow ee birta birtu waxay u egtahay mid cajaa'ib leh waxayna la jaanqaadayaan qurxin kasta.
Adag oo sifiican loo sameeyay: Waxaa lagu dhisay bir adag, bir adag. Qaab dhismeedka qaansoleyda iyo dhisme adag oo isku xiraya meel kasta oo xiriir si looga hortago gariir, foorari, ama dhicitaan
Stackable & Detachable: Naqshadeynta lakabku waxay abuurtaa keyd toosan oo isku xirxiraa ilaa cutubyo badan oo kordhiya booska lagu kaydiyo, ama si gooni ah u adeegsada.
Nice & Compact: Qalabkan khamriga ee fudud waa mid adag oo is haysta. Rakhidan khamriga ee birta ah waxay haysaa 6 dhalo, midab gaar ah iyo qaab joomatari ah ayaa ka dhigaya khamrigaan istaahila in lagu muujiyo jikada, qolka cuntada, miiska, qaboojiyaha, kabadhada ama meelaha yar yar ama aagga baarka.
Rakhitaanka khamrigu runtii waa fikrad hadiyad weyn u ah asxaabtaada ama xubnaha qoyskaaga. Dhibaato badan oo ku saabsan qafiskan khamriga, waxaad xor u tahay inaad nala soo xiriirto, hubaal waan xallin doonaa waqtiga.
Hore: Musqusha heysata musqusha leh taleefan istaag
Xiga: raaxo qaali ah kor u qaad weel quudinta qunyar socodka saxanka biyaha (A)
Musqusha heysata musqusha leh taleefan istaag
Haweenta gogosha leh ee birta lagu qurxiyo